जब तपाइँको व्यवसायलाई सम्मिलित गर्ने
तपाईंले समावेश गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, के तपाईंले विचार गर्न सक्नु हुन्छ तपाईंले सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग सम्पत्तिहरू जोखिममा छन् भने, तपाईं त्यहाँ सुरु गर्नु पर्छ। लेनदेनकर्ताको आँखामा, तपाईले स्वामित्व राख्नु भएको सम्पत्ति हो। तपाईंको घर, बैंक खाताहरू, लगानी खाताहरू र सम्पत्ति व्यवसाय दायित्वहरू पूरा गर्न लक्षित हुन सक्छ। तपाइँको व्यक्तिगत दायित्व सीमित एक प्रमुख कारक समावेश गर्न को लागी हो। समावेशीकरणले तपाईंलाई व्यापक वित्तीय परिदृश्य प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईं कम करको माध्यमबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ र अधिक पैसा राख्नुहोस्। यो तपाईलाई कस्तो प्रकारको व्यवसायमा संलग्न छ सावधानीपूर्वक तौल गर्नु पर्छ।
"थ्रेसहोल्ड बुझ्नु महत्वपूर्ण छ। तपाईंको व्यवसायलाई औपचारिक रूपमा कहिले व्यवस्थित गर्ने आय, कर र दायित्व सबैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।"
आफैलाई केहि प्रश्न सोध्नुहोस्; के तपाईं उच्च जोखिमयुक्त व्यवसाय उद्योग मार्फत तपाईंको सम्पत्ति उजागर गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै खतरनाक सामग्री वा कसैको लागि ढोका खोल्दा तपाईंलाई दायित्वमा पार्ने कामहरू जस्तै कामदारहरूलाई भाडामा लिने? कस्तो प्रकारको ब्यापार खर्च लाग्नेछ जब सम्मिलित हुन्छ? के तपाइँको व्यवसाय, वा यो निकट भविष्य मा, वाहनहरु वा उपकरणहरु को रूप मा आफ्नो सम्पत्ती छ? केवल माथिका उदाहरणहरूमा तपाईलाई समावेशीकरणका फाइदाहरू बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
एक साइड व्यवसाय शामिल
यहाँ हामी सानो व्यवसायको उदाहरण खोजी गर्नेछौं जुन केहि "साइड काम" को रूपमा शुरू भयो र कुन मुख्य दहलीजमा समावेश थियो व्यवसायलाई समावेशीकरण गर्न।
उदाहरण: माईक एक ट्रक निलम्बन पसल को एक पूर्ण समय कर्मचारी हो र किट स्थापना गर्दछ र प्रदर्शन वाहनहरु को लागी अनुकूलन घटक बनाउँछ। प्राय जसो उसलाई विशेष परियोजनाहरु, जस्तै रेस ट्रक, भवन बम्पर, रोल पिंजरा र विशेष प्रणाली कम्पोनेन्टहरूका लागि आरोहणको लागि उधार लिन सोधेछ। उसले आफ्नो ग्राहकको टिमसँग काम गर्ने खाली समयमा उनीहरूका उपकरणहरू र कार्यक्षेत्रहरू प्रयोग गर्दै गर्छ। हाल उहाँ एक हप्ता काम गर्दै दुई हजार डलर बनाउँदै हुनुहुन्छ र दौडको मौसममा धेरै ढिलो रातहरू टोलीलाई मद्दत गर्दछ, आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्दै। माइकले सोचे कि ऊ अहिले सम्मिलित हुन आवश्यक छैन।
माइकले आफ्नो व्यक्तिगत कर रिटर्नमा आम्दानीको दावी गर्दछ, यद्यपि उसको व्यवसाय कटौती हुँदैन किनकि ऊ केवल सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ र उपकरण वा उपकरणहरू चाहदैन, जस्तै वेल्डिंग आपूर्ति र कम्प्रेसरहरू। माइक एक्लो छ र एउटा अपार्टमेन्ट भाँडामा छ र कम से कम व्यक्तिगत सम्पत्ति छ। उसको पक्ष परियोजनाहरु बाट उसको राजस्व उसको पूर्ण समय रोजगार आयको एक चौथाई हो। माइकको कार्यले उसलाई व्यक्तिगत चोट परिदृश्य वा उत्पादन दायित्वमा पार्दैन, त्यसैले आफ्नो जोखिम कम छ। यस अवस्थामा माईकको एकल स्वामित्व रहन र कम वा कुनै आइटममाइज्ड ब्यापार कटौतीको साथ उसको छेउको आय दाबी गर्नु उत्तम हितमा हुन सक्छ।
हामी यही उदाहरणका साथ जारी राख्न सक्छौं र माइकको ब्यवसाय एक बर्षमा बढेको देखाउन सक्छौं। अब उसले आफ्नै उपकरणहरू कि्यो, यसलाई बोक्नको लागि एक ट्रेलर र आफ्नो उपकरणहरू लिन ट्रक। उसको व्यवसायमा अब सम्पत्ति छ। थप रूपमा, माइकले धेरै पैसा कमाइरहेको छ र आफ्नै ठाउँ भाँडामा लिने विचार गर्दैछ ताकि ग्राहकहरू समय-समयको लागि उसको निर्माण कार्यमा जाँदा सवारीसाधन ल्याउन सक्दछन्। माइकले एक सहायक पार्ट-टाइम भाडामा लिन पनि विचार गरिरहेको छ। यसले एक दहलाई पार गर्छ जहाँ समावेशीकरण पछिल्लो चरण हुनुपर्दछ। माइकले अब उसको ब्यापार आय र खर्च बढाउँदैछ। उसले भाँडामा लिएको ठाउँ जहाँ ग्राहकहरू र वितरण व्यक्तिहरू नियमित आधारमा उपस्थित हुन्छन् उसलाई व्यक्तिगत चोट परिदृश्यहरूमा उजागर गर्दछ। एक कर्मचारीलाई काममा लिनुको मतलब यो हो कि उसको कर्मचारीले व्यापारको तर्फबाट जे गर्छ, माइक जिम्मेवार छ। यो दायित्व भनेको अब समाहित हुने समय हो। अब माइकलाई सल्लाह दिइएको छ कि उसको व्यवसायलाई आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थालाई अलग गर्नको लागि पहिले उसको व्यवसायलाई समावेशीकृत संस्था अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने।
माइकले एकल प्रोप्राइटर सुरु गर्न सक्थ्यो र उसको बृद्धिमा थ्रेसहोल्ड हुने सुझाउ दिन्छ कि उसले आफ्नो व्यवसायलाई समाहित गर्दछ। यदि माइकको व्यवसाय योजना आंशिक समय सुरु हुने थियो, उपकरण र बिस्तारै उपकरणहरू प्राप्त गर्ने हो भने, त्यसपछि एउटा ठाउँ खोज्नुहोस् र आफ्नो कपडालाई पूर्ण-समय लिनुहोस्, उसले आफ्नो व्यवसायको थालनीमा समावेश गर्न चाहेको हुन सक्छ। यसले अतिरिक्त फाईदाको लागि ढोका खोल्यो। यदि माइकले उपकरणको एक टुक्रा लीज वा वित्तपोषण गर्ने हो भने, उसको व्यवसाय x बर्ष सम्म समाहित भैरहेको छ एक ब्यावसायिक profileण प्रोफाइल स्थापना भएको फाइदा हुन सक्छ, अगाडि उसलाई उसको व्यवसायबाट अलग गर्ने। अझ बढी उनको दायित्व सीमित गर्दै।
स्टार्ट-अप व्यवसाय निगमन
अर्को उदाहरण परिदृश्य एक स्टार्ट-अप व्यवसाय हो जसको कार्यकारी व्यवस्थापनको ईन्टरप्राइजको बृद्धि र बिक्रीको लागि ठूला योजनाहरू छन् जहाँ समावेशीकरण पहिलो दिनदेखि योजनामा ​​छ।
उदाहरण: Deanna एक कानूनी सेवाहरू सानो व्यवसाय मालिक हो जसले अन्य व्यवसाय मालिकहरूलाई उनीहरूको कर्पोरेट औपचारिकताहरू मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ। उनले स्थानीय ग्राहक आधारको लागि कर्पोरेट रेकर्डहरू, मिनेट पुस्तकहरू र कानूनी कागजातहरू अद्यावधिक राख्छिन्। उनको व्यवसाय प्यारागलल सेवामा आधारित छ एक ह्यान्डस-अप दृष्टिकोण प्रयोग गरेर जहाँ उनी आफ्ना ग्राहकहरुका सबै कागजात आवश्यकताहरू उनको स्थापना गरिएको व्यापार कार्यालयहरु र कर्मचारीहरु मार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्। उनीले वेब-आधारित सफ्टवेयर विकास गर्ने निर्णय गर्छिन् जसले उनको ग्राहकहरूलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा जानकारी प्रदान गर्न सक्षम गर्दछ जसले उनीहरूलाई डाउनलोड गर्ने कानुनी कागजात सिर्जना गर्दछ। अब Deanna पुग्न वैश्विक छ, ईन्टरनेट को माध्यम बाट, र उनको लक्षित बजार अब देश मा हरेक समाहित व्यापार सामिल छ।
Deanna व्यापार मॉडल र टेक्निकल समाधान को सुविधा को लागी जहाज बाहिर सल्लाहकारहरु ल्याउँछ। उनीले निर्णय लिइन् कि यस व्यवसायले ठूलो राजस्व सम्भावना छ र कम्पनीलाई छिटो अगाडि सार्न र यस प्रविधिलाई बजारमा ल्याउन लगानीकर्ताहरू खोजी गर्न गइरहेको छ। उनको परामर्शदाताहरूको साथ काम गर्दै, व्यवसाय मोडलि takes लिन्छ साथै सफ्टवेयर विकासको लागि व्यवसाय विश्लेषण पनि लिन्छ। उनी तुरुन्तै व्यवसाय समावेश गर्न चाहान्छिन्। उनीले पहिलो 24 महिना भित्र 12 मान्छेहरूको स्टाफ पाउन आशा गर्छिन्, कार्यालयको ठाउँ र उपकरणहरू पट्टे लिनेछन् र परामर्श सल्लाहकारहरूलाई यस व्यवसायको सुरूवातमा उनीहरूको खर्चका लागि प्रतिपूर्ति गर्नेछन्।
यो त्यस्तो अवस्था हो जुन समावेशी वारंटहरू हो। यस व्यवसायको लागि योजनाहरू र व्यबसायको लागि आवश्यक व्यापार लागत केवल औपचारिक मोडेललाई औपचारिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने लागतलाई व्यवसायको समावेशी इकाईमा राम्रोसँग नाममात्र बनाउँदछ। यसले लगानीकर्तालाई प्रमाणित गर्छ कि उनी सफलताको लागि गम्भीर छन् र भविष्यमा ब्यापारमा छिन्। उनले आफ्नै व्यक्तिगत कोषहरु लगानी गरी र अनलाईन लेनदेनको लागि एक व्यापारी खाता ग्यारेन्टी गर्न आफ्नो व्यक्तिगत क्रेडिट बढाइएको छ। उनले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवसाय आफूलाई अलगबाट अलग निकायको रूपमा शुरू गरे किनकि उनी अहिले नै सामेल छन्, त्यसकारण उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवसाय दायित्व र दायित्वहरुमा पर्दाफास हुँदैन - एक व्यापारी खाताको लागि एक व्यक्तिगत ग्यारेन्टीको अपवाद बाहेक, हामी छलफल गर्नेछौं। यी शीर्षकहरू पछि गाईडमा।
प्रमुख देयता संरक्षण को लागी शामिल गर्नुहोस्
केहि अवस्थाहरूमा, कुनै पनि कुरा भन्दा अगाडि समाहित नहुनु यो हास्यास्पद हुनेछ। अर्को उदाहरणमा, र छोटो एक, समावेशीकरण बिल्कुल आवश्यक छ।
उदाहरण: जिम एक प्लास्टिक सर्जन हुन्, आफ्नो अभ्यास खोल्दै। यस पेशेले उनलाई अपराधी सूट, उत्पाद दायित्व (केहि केसहरुमा) र उसको लेनदेनकर्ताले उसको सम्पत्तिलाई लक्षित गर्ने असंख्य एक्सपोजरको लागि खोल्दछ जसलाई एक निर्णय दिइयो जुन उसको बीमा नीति भन्दा बढी थियो। एक राम्रो बीमाकृत, अनुभवी, पेशेवर पनि यस क्षेत्र मा दायित्व तूफान उम्कन सक्दैन। यहाँ जिमले आफ्नो नयाँ अभ्यास खोल्नको लागि एक पेशेवर कर्पोरेसन समाहित गर्दछ।
यी उदाहरणहरू कुनै पनि प्रकृतिमा समान थिएनन्, तथापि समावेशीकरणलाई विचार गर्दा यसले समान निर्णय प्रक्रियालाई प्रदर्शन गर्दछ। सर्वप्रथम हामीसँग एक व्यक्ति थियो जसले पूर्ण-समय रोजगारमा थोरै पैसा कमाइरहेका थिए, जहाँ उसको व्यवसाय बढेको थ्रेसहोल्डहरू भयो जुन दायित्व संरक्षणको माग गर्दछ जहाँ निगाह अर्को चरण थियो। दोस्रो उदाहरणमा हामीसंग एक उद्यमी थियो जुन कुनै दायित्व [अहिलेसम्म] मा पर्दाफास भयो र कानुनी बिभाजन, विश्वसनीयता र उद्यम पूँजी मार्फत सफल व्यवसाय बढाउनको उनको भावी लक्ष्यहरूको समर्थन गर्न समावेश गर्ने निर्णय गरे। अन्तिम उदाहरणमा हामी यस्तो अवस्था अन्वेषण गर्छौं जहाँ समावेशीकरण केवल आवश्यक थियो। तीन धेरै फरक परिस्थितिहरू, यद्यपि ती सबैले एउटा व्यवसाय, दायित्व संरक्षण, कर न्यूनिकरण, विश्वसनीयता, लगानीकर्ता पूँजी आकर्षित गर्ने आदि जस्ता कारकहरूको बिरूद्ध रोकेका थिए।